Uru dị n'ịrụ ọrụ ebere | Martech Zone
Uru Ọ bara Ọrụ Ebere
Peoplefọdụ ndị na-agba ọsọ n’ụzọ ọzọ mgbe a gwara ha rụọ ọrụ ebere. Onweghi onye chọrọ iji oge ehihie, ụbọchị, ma ọ bụ izu ụka pụọ ​​na ọrụ ha kwa ụbọchị. Ha na-arụsi ọrụ ike, ma ọ bụ na ha achọghị ịrara oge nye ihe na-agaghị abara ha uru n'ụzọ ụfọdụ. Na a naghị akwụ gị ụgwọ maka ọrụ ị na-arụ, ọ pụtaghị na ọ nweghị uru ọ bụla.
Bọchị izu ole na ole gara aga, ejiri m awa 48 dum, ya na ndị ọzọ, na-ewu weebụsaịtị zuru oke maka nzukọ na-enweghị uru. A na-akpọ ihe omume ahụ Refresh Weekend ma ọ bụ Justin Harter na-ahazi ya. Na ngwụcha izu ahụ, enyere ndị ọrụ ebere anọ dị iche iche dị egwu nke kwekọrọ na otu ọ bụla chọrọ.
Agbanyeghị na akwụghị m ụgwọ maka awa 48 ahụ, lee otu m si rite uru na mmemme ahụ:
Uber ịkparịta ụka n'.ntanet - Ezutere m ọtụtụ ndị mmepe, ndị na-ese ihe na ndị na-ese vidio na Refresh Weekend. Onye ọ bụla n’ime ha nwere nkà pụrụ iche nke ha webatara na tebụl. Ihe niile dị ugbu a dị mkpa na ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ. Ọ bụghị naanị na m nụrụ ka ndị a na-ekwu maka ihe ha na-arụ maka ndụ, mana enwere m ike ịhụ ka ha na-eje ije n'okwu ahụ. Ugbu a enwere m nkwa na ndị a maara ihe ha na-eme. Uru a naanị agaghị eweghachi.
Kickback - Mgbe ọ bụla enwere nnukwu ọrụ ebere, a na-enwekarị nkwupụta mgbasa ozi ma ọ bụ ọkwa ụdị ụfọdụ. N'otu oge, a na-amata aha gị ma gosipụta ọrụ gị. Akụkụ kachasị mma banyere kickback site na ọrụ ebere bụ na ọ nwere ike ọ na-abịa site na ndị na-ege ntị nke ị na-enweghị ike iru na mbụ. Site na ịhọrọ inyere ndị ọrụ ebere aka, ọ ga - ekwe omume na ị ga - enweta ndị na - ege ntị na netwọkụ ebere.
Ọ Dị nnọọ Ka Ọ Dị Mma - A na m enweta ezigbo egwu dị egwu mgbe m nyere onye kwesiri ya aka. Achọpụtara m na mmetụta a siri ike nghọta. Ọ dị mma karịa ikiri ndị ị hụrụ n’anya mepere onyinye ị zụtara ha n’ụtụtụ ekeresimesi. Wa ga - abụ ihe siri ike karịa enweghị obi ebere na inye. Onwere ike a naghị akwụ gị ego n'ọrụ gị, mana a ka nwere uru ị ga-erite n'ime nke ahụ.
Geotoko: Multi-Platform Ebe-Dabere Mgbasa Ozi
Feb 1, 2011 na 3:00 PM
Kpam kpam kwenyere, Stephen, na m n'ezie mpako na ị bụ akụkụ nke DK New Media ma nyere aka na oru dika nke a. Aga m agbakwunye na enwere nnukwu ohere azụmaahịa na ndị ọrụ ebere - ndị isi azụmaahịa na-ejikọkarị ụlọ ọrụ ha maara na ha bụ ndị ọrụ ebere.
Apr 5, 2011 na 1: 16 PM
Enweela m ike ugboro atọ na-arụ ọrụ afọ ofufo nye ụfọdụ ọrụ ebere na achọghị m ịkọ aha. Mmetụta ahụ bụ ihe nkịtị ma maa mma nke ukwuu. Enweghị ego ebe ahụ ma ị gaghị atụ anya na mbu. Ihe dị mkpa bụ na ị nwere ike isonye ebe ọ bụ na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịme nke ahụ ma nwee ike ịghọta nke ahụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmịrị ndị ọzọ ọrụ karịa, hapụ oge iji rụọ ọrụ ebere.
Nye onyinye ụgbọ ala
Wheels N'ihi na Chọrọ